रिसाइक्लि - - शिल्पहरू अन | शिल्प खुल्ला (पृष्ठ २)
चराहरूको लागि फिडरहरू र घरहरूका लागि विचारहरू
सबैलाई नमस्कार! आजको लेखमा हामी चराहरूको लागि फिडर र घर बनाउने पाँचवटा विचारहरू हेर्न जाँदैछौं।
15 सजिलो पुनर्नवीनीकरण शिल्प
के तपाई ती सामग्रीहरूलाई दोस्रो जीवन दिन चाहानुहुन्छ जुन बर्बाद हुन जाँदैछ? यी 15 सजिलो पुनर्नवीनीकरण शिल्पहरूमा नछुटाउनुहोस्!
ऐनासँग गर्न DIY विचारहरू
सबैलाई नमस्कार! आजको लेखमा हामी ऐना बनाउन वा सजाउने केही उपायहरू देख्न जाँदैछौं जुन…
पुरानो लुगा संग2कुकुर खेलौना
सबैलाई नमस्कार! आजको लेखमा हामी हाम्रा कुकुरहरूका लागि खेलौना बनाउनका लागि दुईवटा विचारहरू हेर्न जाँदैछौं ...
5 शिल्पहरू हाम्रो बैठक कोठा र/वा शयनकक्षहरू कुसनसहित नवीकरण गर्न
सबैलाई नमस्कार! आजको लेखमा हामी हाम्रो बैठक कोठा र/वा…
जहाज र समुद्री डाकू कथाहरु को प्रेमीहरु को लागी3शिल्प
सबैलाई नमस्कार! यस लेखमा हामी डुङ्गा प्रेमीहरूको लागि तीन आदर्श शिल्प कसरी बनाउने भनेर हेर्न जाँदैछौं ...
बच्चाहरु संग गर्न कोर्क संग शिल्प
31 सबैलाई नमस्कार! आजको लेखमा हामी बच्चाहरु संग गर्न कोर्क को उपयोग गरेर धेरै शिल्प हेर्न जाँदैछौं ...
गत्ता र गत्ता संग बनेको हास्यास्पद पुतलीहरू
पुनर्नवीनीकरण गत्ता ट्यूबहरू र कार्डबोर्ड र पोम्पमहरू जस्ता सजिलो सामग्रीहरूसँग केही धेरै सजिलो पुतलीहरू कसरी बनाउने भनेर नबिर्सनुहोस्।
पेंगुइन बनाउन4तरिका
नमस्कार सबैलाई! चिसो क्षेत्रका प्रतिनिधि जनावरहरू मध्ये एक र हिउँसँग सम्बन्धित पेंगुइन हो, ...
decoupage संग पुनर्नवीनीकरण जार
यदि तपाइँ रिसाइकल गर्न चाहनुहुन्छ भने, यहाँ यो उत्तम प्रस्ताव छ। हामी दुईवटा क्यान वा क्यानहरू प्रयोग गर्नेछौं र तिनीहरूलाई decoupage प्रविधिसँग सजाउनेछौं।
चिसो दिउँसो बनाउन3शिल्प
नमस्कार सबैलाई! आजको लेखमा हामी अब गर्नका लागि तीनवटा शिल्पहरू हेर्न जाँदैछौं कि ...
नमस्कार सबैलाई! आजको लेखमा हामी विभिन्न शिल्पहरूमा विभिन्न भालुहरू कसरी बनाउने भनेर हेर्न जाँदैछौं। हरेक भालु...
यदि तपाइँ रमाईलो शिल्प मनपर्छ भने, यहाँ केहि रमाइलो पिशाचहरू यस हेलोवीनको लागि चकलेटहरूसँग रमाइलो गर्नका लागि छन्।
5 ट्वाइलेट पेपर रोल कार्डबोर्ड शिल्प पुल को समयमा बनाउन को लागी
नमस्कार सबैलाई! आजको लेखमा हामी पाँचवटा शिल्पहरू हेर्न जाँदैछौं जुन रोल कार्टनको साथ बनाउन सकिन्छ ...
हेलोवीन को लागी ड्रेस अप गर्न शिल्प
नमस्कार सबैलाई! आजको लेखमा हामी तपाईंलाई शिल्पका लागि धेरै विचारहरू दिनेछौं जसले तपाईंलाई मद्दत गर्नेछ ...
4 विचार हेलोवीन मा कैंडी दिन
नमस्कार सबैलाई! आजको लेख मा हामी तपाइँलाई कैंडी वा चकलेट मा चार सिद्ध विचारहरु दिन जाँदैछौं ...
पुरानो जार सजाने को लागी
यी पुराना जारहरु संग पुनर्नवीनीकरण कि तपाइँ केहि सरल चरणहरु संग सजाउन र तपाइँको सबै रचनात्मकता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
रमाईलो ढु stone्गा cacti को एक भाँडो बनाउन छ। तिनीहरू बच्चाहरु संग गर्न को लागी एकदम सही छन् र उनीहरु मनोरन्जन र रंग को पूर्ण छन्।
नमस्कार सबैलाई! आजको शिल्प मा हामी कसरी सजीलै सुन्तला स्लाइस वा सुक्खा हेर्न को लागी जाँदैछौं ...
कार्डबोर्ड फूल गुलदस्ता, एक विस्तार गर्न को लागी सही
नमस्कार सबैलाई! आज को शिल्प मा हामी कसरी फूलहरु को यो सुन्दर गुलदस्ता बनाउन को लागी जाँदैछौं, सबै को ...
उत्तम centerpieces शरद decorateतु मा सजाने को लागी
नमस्कार सबैलाई! शरद comingतु आउँदैछ र यसको साथ, यो सम्भव छ कि हामी घर को सजावट संग परिवर्तन गर्न चाहान्छौं ...
छुट्टी को फिर्ता को लागी5रीसाइक्लिंग शिल्प
नमस्कार सबैलाई! आज को लेख मा हामी तपाइँ को लागी सही रीसाइक्लिंग शिल्प को5विचारहरु दिन को लागी जाँदै हुनुहुन्छ ...
यस शिल्प मा हामी तपाइँलाई केहि धेरै सरल र मौलिक हस्तनिर्मित साबुन बनाउन को लागी, घर बाट साबुन रिसायकल गर्न सिकाउनेछौं।
5 शिल्प रमाईलो गर्न र पछि उनीहरु संग खेल्न को लागी
नमस्कार सबैलाई! आजको लेख मा हामी तपाइँ5सही शिल्प डाउनटाइम कब्जा गर्न ल्याउन। हामी रमाईलो गर्न सक्छौं ...
पुनर्नवीनीकरण कटोरा मा सुन्दर सुगन्धित मोमबत्ती बनाउन को लागी पत्ता लगाउनुहोस्। यो सजाउन र उपहार को रूप मा दिन को लागी एक मूल र विशेष शिल्प हो। उत्साहित हुनुहोस्
काठको लाठी संग हास्यास्पद जनावरहरु
पत्ता लगाउनुहोस् कसरी काठको लाठी संग रमाईलो र मूल जनावरहरु बनाउन। हामीले एउटा कुकुर, एक माछा र एक डायनासोर पुन: निर्माण गरेका छौं।
बच्चाहरु को लागी हुप्स को सेट
नमस्ते सबै! आजको शिल्प मा हामी कसरी बच्चाहरु संग रिंग को यो खेल बनाउन को लागी जाँदैछौं ...
5 शिल्प काठको clothespins संग बनाउन को लागी
नमस्ते सबै! आज हामी तपाइँ शिल्प को लागी काठ का कपडाको टुक्रा संग बनाउन को लागी5प्रस्तावहरु लाई ल्याउन। हामीलाई चाहिन्छ…
घर को लागी उपयोगी शिल्प, तातो घण्टा मा समय कब्जा गर्न को लागी सही
नमस्ते सबै! आजको लेख मा हामी कसरी विभिन्न शिल्प बनाउन को लागी कि मनोरन्जन को बावजूद को बारे मा कुरा गर्न जाँदैछौं ...
हिप्पी लटकन एक सीडी संग बनाइयो
यो लटकन ऊन प्रयोग गर्न सिक्न चाहने ती सबै बच्चाहरु को लागी एक उत्कृष्ट शिल्प हो। उनीहरु आफैं मनोरञ्जन गर्न र रमाईलो गर्न सक्षम हुनेछन्।
कानुनी धारक फ्रेम
यो रिसाइक्ल इयरिंग फ्रेम तपाईको र in्गीन र मूल झुम्का विशेष ठाउँमा देख्नको लागि उत्तम विकल्प हो।
पुन: साइकल क्यानको साथ बर्ड फिडर
रमाईलो छ खाना को दुई डिब्बा केहि बर्ड फीडर, केहि सामाग्री र बनाउन को लागी सजीलो बनाउन को लागी सक्षम हुन को लागी।
पुरानो सजावट नोटबुक लाठी संग
पत्ता लगाउनुहोस् कि कसरी पुरानो नोटबुकलाई केही साधारण काठको स्टिकहरू र थोरै एक्रिलिक पेन्टको साथ बनाउने जुन त्यो सुन्दर देखिन्छ।
कागज वा रबर फोमको साथ बनाउनको लागि make फूलहरू
सबैलाई नमस्कार! आज हामी तपाईलाई फूल बनाउनको लागि different बिभिन्न तरिकाहरू ल्याउँछौं। तपाईं कागज, कागज जस्ता विभिन्न सामग्रीहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ।
भोजमा समुद्री डाकूहरूले भोजमा दिन
उपहारको रूपमा केही लाठीहरू, गत्ता र केही चकलेट सिक्काको साथ धेरै साधारण तरिकामा रमाइलो समुद्री डाकू कसरी बनाउने पत्ता लगाउनुहोस्।
पौंडी पोखरीका लागि घाँस मार्ग
सबैलाई नमस्कार! आजको शिल्पमा हामी यस सुन्दर घाँस मार्ग कसरी बनाउने भनेर त्यहाँ जान्छौं ...
जनावरहरूसँग XNUMX खेल
सबैलाई नमस्कार! आजको शिल्पमा हामी सामग्रीहरू प्रयोग गरी कसरी मूल तीन इन-वन बनाउने भनेर हेर्न गइरहेका छौं ...
Cra शिल्पहरु आफैंको घण्टामा मनोरन्जन गर्नका लागि
सबैलाई नमस्कार! गर्मी आएको छ र यसको साथ गर्मी संग, त्यसैले केहि घण्टा राम्रो छ ...
गत्ताबाट बने सुपरहीरो
केहि कार्डबोर्ड ट्यूबहरूलाई धेरै हास्यास्पद सुपरहीरो आकारको साथ रीसायकल गर्न सिक्नुहोस्। यो एउटा शिल्प हो जुन घरमा साना बच्चाहरूलाई मनपर्दछ
शौचालय पेपर रोल कार्डनको साथ कप
सबैलाई नमस्कार! आजको शिल्पमा हामी कार्डबोर्डको साथ यो साधारण मग कसरी बनाउने भनेर हेर्ने छौं।
शौचालय कागज रोलहरूमा स्ट्याम्प गर्न ज्यामितीय आकारहरू
सबैलाई नमस्कार! आजको शिल्पमा हामी ज्यामितीय आकारलाई स्ट्याम्पमा बनाउन जाँदैछौं। यो एक शिल्प छ कि जान्छ ...
तातो मौसममा आउटडोरका लागि perfect उत्तम शिल्प
सबैलाई नमस्कार! राम्रो मौसमको साथ हामी हाम्रो घरहरूको बाहिरी क्षेत्रमा हुन चाहन्छौं, त्यसैले हामी तपाईंलाई ...
Cra शिल्प विचारहरु हाम्रो वस्तुहरु लाई दोस्रो मौका दिनुहोस्
सबैलाई नमस्कार! आज हामी तपाईंलाई बिभिन्न विचारहरू दिँदैछौं ताकि तपाईं हामीसँग भएको केही चीजहरूको पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ र ...
Corks संग उल्लू
सबैलाई नमस्कार! आजको शिल्पमा हामी कर्कको साथ यो प्यारो उल्लू कसरी बनाउने भनेर हेर्न जाँदैछौं। यो छ ...
सजिलो पिगी बैंक रिसाइक्लि milk मिल्क पाउडर प्रकार
सबैलाई नमस्कार! आजको शिल्पमा हामी यो पिंगल बैंकलाई कसरी एक सरल तरीकाले बनाउने भनेर हेर्ने छौं। यो छ ...
सबैलाई नमस्कार! आज हामी शिल्प को सिक्न को लागी धेरै विचारहरु हेर्न जाँदैछौं, तिनीहरू बच्चाहरु संग गर्न को लागी सही छन् ...
पिस्ता शेलहरूको साथ मैनबत्ती होल्डर
सबैलाई नमस्कार! आजको शिल्पमा हामी तपाईंलाई पिस्ता शेलहरू प्रयोग गर्ने मौलिक तरिका ...
सबैलाई नमस्कार! आजको शिल्पमा हामी मजा लिइरहेका छौं कि कसरी हेर्ने छौं: यो खेल ...
ठूलो कार्डबोर्ड ट्यूबको साथ हामी यसको आकार पुनः वर्षा पोलमा बनाउन पुनःनिर्माण गर्न सक्दछौं। यो सजिलो र पहुँचयोग्य सामग्रीको साथ बनाईएको हो।
गत्ता र गत्ता खरायो
सबैलाई नमस्कार! आजको शिल्पमा हामी एक धेरै मा एक खरायो बनाउन अर्को विकल्प हेर्न जाँदैछन् ...
प्लास्टिक काँटाको साथ फूल
सबैलाई नमस्कार! आजको शिल्पमा हामी प्लास्टिकको काँटाले यो फूल कसरी बनाउने भनेर जान्छौं।
पुन: साइकल गरिएको सामग्री जस्तै कार्डबोर्ड, पेन्ट र ऊनको साथ यी प्यारा राजकुमारीहरू कसरी बनाउने पत्ता लगाउनुहोस्। तपाईंले यसलाई मनपराउनुहुनेछ किनकि उनीहरू प्यारा छन्।
सबैलाई नमस्कार! आजको शिल्पमा हामी आकारमा यो हास्यास्पद पेन्सिल भाँडो कसरी बनाउने भनेर हेर्ने छौं।
वसन्त रूख, बच्चाहरूसँग गर्न सजिलो र सरल
सबैलाई नमस्कार! आजको शिल्पमा हामी एक वसन्त शिल्प बनाउन जाँदैछौं, यसको साथ फूल फुल्ने ...
पुनर्नवीनीकरण क्यानको साथ मोमबत्तीहरू
हामी तपाईंलाई एक धेरै रमाईलो र मौलिक तरीका देखाउँदछौं तपाईंको क्यान रीसायकल गर्न र जुट डोरीको साथ विन्टेज टच दिनुहोस्। पत्ता लगाउनू!
Glass शिल्पहरू गिलासको बोतलहरू र जारहरू रिसायकल गर्न
सबैलाई नमस्कार! आजको लेखमा हामी हेर्ने छौं कि हामी कसरी गिलासको बोतलहरू र जारहरू रीसायकल गर्न सक्छौं ...
बोतल डोरी र ऊन संग सजाइएको
सबैलाई नमस्कार! आजको शिल्पमा हामी ती बोतलहरूलाई कसरी दोस्रो जीवन दिने भन्ने कुरा जान्न लाग्यौं ...
अण्डा डिब्बाहरूको साथ मशरूम
सबैलाई नमस्कार! यस शिल्पमा हामी अंडा कार्टनहरूको साथ यो प्यारो रातो मशरूम कसरी बनाउने भनेर हेर्ने छौं। यो छ ...
अंडा कपको साथ Jellyfish
सबैलाई नमस्कार! आजको शिल्पमा हामी हेर्दै छौं कि कसरी कार्डबोर्डको प्रयोग गरेर राम्रो जेलिफिश बनाउने ...
अण्डाको कपको साथ व्हेल
सबैलाई नमस्कार! आजको शिल्पमा हामी हेर्ने छौं कि कसरी यति साधारण चीजको साथ प्यारा व्हेल बनाउने ...
छीलो रहेको झोला फिक्स गर्नुहोस्
सबैलाई नमस्कार! आजको शिल्पमा हामी केही फरक तरिकाले कार्य गर्न गइरहेका छौं, हामी तपाईंलाई अवहेलना गर्न एउटा ट्रिक सिकाउँदैछौं ...
Animal जनावर शिल्प
सबैलाई नमस्कार! यो लेखमा हामी animal जनावर शिल्पहरु प्रस्ताव गर्न जाँदैछ कुनै दिउँसो गर्न र खर्च गर्न ...
बिरालाहरू कार्डबोर्ड ट्यूबबाट बनेका छन्
कार्डबोर्ड ट्यूबहरूका लागि धन्यबाद हामी केहि प्यारा बिरालाको बच्चाहरू बनाउन सक्दछौं ताकि तिनीहरूले डु as्गाको रूपमा सेवा दिन सक्छन् र हाम्रो पेन्टहरू र पेनहरू भण्डार गर्न सक्छन्।
Re रिसाइक्लि cra शिल्पहरू बर्ष सुरू गर्न
सबैलाई नमस्कार! हामी नयाँ वर्ष सुरू गर्छौं र केहि राम्रो तरीकाले रिसाइक्लि start र सानोमा जागरूकता सिर्जना गर्न सुरु गर्ने ...
Perfect उत्तम शिल्पहरू बच्चाहरूसँग वर्ष सुरू गर्न
सबैलाई नमस्कार! नयाँ वर्ष को आगमन संग, के राम्रो तरीकाले केटाकेटी संग केहि शिल्प गर्न शुरू गर्न ...
पेन्ग्विन अंडेको गत्ते का डिब्बा संग
सबैलाई नमस्कार! आजको शिल्पमा हामी यो अनुहारको पेन्ग्विन अंडाकार्टनबाट कसरी बनाउने भनेर हेर्ने छौं।
अंडा कपको साथ सानो चरा
सबैलाई नमस्कार! आजको शिल्पमा हामी हेर्नेछौं कि हामी कसरी चरा वा कुकुरलाई बाहिर बनाउन सक्छौं ...
अण्डाको कपको साथ दानव
सबैलाई नमस्कार! आजको शिल्पमा हामी अंडी कार्टनहरूको साथ यो अजीब राक्षस कसरी बनाउने भनेर हेर्न जाँदैछौं।
अण्डाको कप र कार्डबोर्डको साथ सजिलो माछा
सबैलाई नमस्कार! आजको शिल्पमा हामी अण्डाको कप र कार्डबोर्डको साथ सजिलो माछा बनाउँदैछौं। यो उत्तम छ ...
कुकुर आकारको पजल
सबैलाई नमस्कार! आजको शिल्पमा हामी तपाईं ल्याउँदछौं कसरी कुकुरको आकारमा पहेली बनाउने। हो…
पुनर्चक्रित कार्डबोर्डको साथ ट्रेन
हामी रिसायकल सामग्री र एक सानो कल्पना को लागी एक सुन्दर ट्रेन बनाएका छौं। रिसाइक्ड सामग्रीका साथ तपाईले राम्रा चीजहरू बनाउन सिक्नुहुनेछ
पुन: पुन: योजनाित विमानहरू
यी विमानहरू यति सुन्दर छन्! केहि सामग्रीहरु संग हामी धेरै साधारण हवाई जहाज बनाउन सक्छौं जो सानाले मन पराउनेछ…।
बच्चाहरुले लगेजका लागि ट्यागहरू
बच्चाहरूसँग गर्न यो सजिलो शिल्पलाई नभुल्नुहोस्। तीनिहरू साधारण लग-इन ट्यागहरू सिर्जना गर्नका लागि हुन् र तपाई यसमा धेरै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
बच्चाहरूसँग बनाउने फुलदाताको रीसायकल
यस शिल्पलाई नबिर्सनुहोस् राम्रो साना रिसाइक्ल फूलदान सिर्जना गर्नुहोस् जुन तपाईं साना बच्चाहरूसँग मिलेर बनाउन सक्नुहुन्छ।
सबैलाई नमस्कार! आजको शिल्पमा हामी यी सुन्दर विवाह क्लिपहरू बनाउन जाँदैछौं, सजावटको लागि उत्तम ...
Bottle शिल्पहरू बोतल कर्कहरू पुन: प्रयोग गर्न
सबैलाई नमस्कार! आजको लेखमा हामी तपाईंलाई कर्क पुनः प्रयोग गर्न give शिल्प विचारहरू दिन लाग्दछौं ...
सेन्सररी बक्स बच्चाहरूसँग बनाउन
हामी तपाईंलाई बच्चाहरूसँग यो गर्न सक्षम हुन सजिलो तरिकामा सेन्सेसरी बाकस कसरी बनाउने, र वस्तुहरू फरक पार्न उनीहरूसँग खेल्न कसरी भन्छौं!
बच्चाहरूका लागि स्टिक गेमहरू
तपाइँ यस शिल्पलाई लाठीको सेटले बनेको मन पराउनुहुनेछ, घरमा साना बच्चाहरूलाई खेल्नका लागि। तपाइँको खेल कौशल विकास गर्नेछ
Perfect उत्तम बुकमार्कहरू दिनका लागि
सबैलाई नमस्कार! आजको लेखमा हामी तपाइँलाई घरमा बनाउनको लागि perfect उत्तम बुकमार्कहरूको संकलन ल्याउँछौं ...
पुरानो फोटो फोटो फ्रेम
यो शिल्पको साथ हामी कसरी एउटा भिन्टेज फोटो फ्रेम बनाउन सिक्नेछौं। रिसाइक्लिंग गरेर र स्यान्ड पेंटको मिश्रणको साथ यो कसरी गर्ने भन्ने बारे पत्ता लगाउनुहोस्।
गत्ता ट्यूबहरूको साथ स्पेस रकेटहरू
कार्डबोर्ड ट्यूबहरू बाहिर दुई धेरै धेरै मूल स्पेस रकेट बनाएर तपाईंको समय पुनःनिर्माण गर्नुहोस्। शिल्प जुन तपाईं बच्चाहरूसँग गर्न सक्नुहुन्छ।
Corks र ऊन संग सजिलो घोडा
सबैलाई नमस्कार! आजको शिल्पमा हामी कर्कहरूसहित यो सुन्दर र साधारण घोडा कसरी बनाउने भनेर हेर्ने छौं ...
यिनकोर्न आकारको बक्स
बक्स कसरी बनाउने सिक्नुहोस् जुन तपाईं पुन: प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ र युनिकोर्नको आकारमा अचम्मै तत्वमा रूपान्तरण गर्न सक्नुहुनेछ। यो रमाईलो र मूल हो।
Cra शिल्पहरू पैकेजिंग रिसाइकल गर्नका लागि जुन हामी प्रत्येक दिन उपभोग गर्छौं
सबैलाई नमस्कार! हामी रिसाइक्लि ofको महत्त्वका बारे बढि सजग छौं वा खपत घटाउँदै ...
कार्डबोर्डको साथ डेस्क आयोजक
केहि गत्ता ट्यूबहरू रिसायकल गर्न यो शिल्पको साथ सिक्नुहोस्। उनीहरूसँग हामी एक धेरै सक्कली र रमाईलो डेस्क आयोजक ब्यवस्थापित गर्दछौं।
पुरानो कपडाको साथ शिल्पको लागि टी-शर्ट यार्न बनाउनुहोस्
सबैलाई नमस्कार! आजको शिल्पमा हामी पुरानो कपडाहरूसहित शिल्पका लागि कपडा बनाउन जाँदैछौं। एक तरिका हो ...
शौचालय पेपर रोलको साथ सजिलो अक्टोपस
सबैलाई नमस्कार! आजको शिल्पमा हामी यस अक्टोपसलाई शौचालय कागज रोल बाहिर बनाउने छौं। यो छ ...
पुरानो रद्दी टोकरीको साथ रोपण गर्ने
सबैलाई नमस्कार! आजको शिल्पमा हामी पुरानो कचौराबाट यस सुन्दर प्लाटर बनाउने छौं। यो आदर्श हो ...
बच्चाहरु संग बनाउन स्लिंगशट
बच्चाहरूसँग गर्न यो सजिलो शिल्पलाई नभुल्नुहोस्, किनकि स्लिंगशट बनाउनको अतिरिक्त उनीहरू आफ्नै सिर्जनासँग खेल्न सक्नेछन्।
बेलुनहरू वा घरेलु र पुन: प्रयोज्य पानी पम्पहरू
सबैलाई नमस्कार! अब तातो दिनहरू नजिक आइरहेको छ ... बेलुन युद्ध गर्नु भन्दा राम्रो के हो वा ...
अण्डा डिब्बाको साथ फूलहरू
सबैलाई नमस्कार! आजको शिल्पमा हामी अण्डाको डिब्बाको साथ केही फूलहरू बनाउन जाँदैछौं। यो शिल्प हो ...
बच्चाहरूलाई के गर्न Maze बक्स
बच्चाहरूलाई बनाउनको लागि यो भूलभुलैया बक्सलाई नभुल्नुहोस् र त्यसो गरे पछि, तिनीहरू मजा खेल्न सक्छन्।
पुतलीहरूका लागि वार्डरोब बक्स
कार्डबोर्ड बक्सको साथ हामी एक महान रिसाइक्लि make बनाउन सक्षम भएका छौं। हामीले यसको आकार बाहुलाका लागि वार्डरोब बनाउनका लागि तयार गरेका छन र यसरी तिनीहरूका सबै लुगाहरू भण्डार गर्दछौं।
स्नातक को लागी साना बक्सहरु
यस शिल्पमा हामी तपाईलाई स्नातक बाकस कसरी बनाउने भनेर सिकाउँछौं। धेरै मौलिक उपहारहरू बनाएर विशेष दिन मनाउने एउटा तरिका।
बच्चाहरूसँग बनाउनको लागि रंगीन कीरा
बच्चाहरूसँग गर्नका लागि यो उत्तम, सजिलो र द्रुत शिल्पलाई नभुल्नुहोस्। तिनीहरू आफ्नै हातले यसलाई बनाउन सक्षम हुन पाउँदा खुसी हुनेछन्।
हेडफोन बक्स रिसाइक्लिंग धातु बक्स
सबैलाई नमस्कार! आजको शिल्पमा हामी एक हेडफोनका लागि बक्स बनाउन धातु बक्सलाई रिसायकल गर्न गइरहेका छौं…।
कानको कलियोंको साथ रंगीन डोमिनोजहरू
यो कान कोपलहरू बनाउनको लागि एक साधारण शिल्प हो र कि बच्चाहरूले मनपर्दछ ... यो एक धेरै विशेष डोमिनो हो!
केटीहरूको लागि पुनः प्रयोग गरिएको जुत्ता बक्स
के तपाइँ जान्नुहुन्छ कि तपाइँ जुत्ता बाकसको साथ अद्भुत विचारहरू गर्न सक्नुहुन्छ? ठिक छ, यो शिल्प को प्रस्ताव रहेको छ, एक रमाईलो तरीकाले रीसायकल गर्न सिक्नुहोस्
यस शिल्पको साथ बोकेर थप्न सिक्नुहोस्
बच्चा बोक्दा यस पुस्तिकाको साथ बोक्दा थप्न सिक्नु धेरै सजिलो हुन सक्छ। हामी तपाईंलाई यो कसरी गर्ने भन्ने देखाउछौं, यो धेरै सजिलो छ!
अण्डि कप पोइन्ट खेल्न
खाली कार्डबोर्ड अण्डाको डिब्बाको साथ, तपाईं बच्चाहरूसँग खेल्नको लागि शिल्प बनाउन सक्नुहुन्छ, यो सजिलो र रमाईलो छ!
मिनी बन्जो बच्चाहरूसँग बनाउनको लागि
एक मिनी उपकरण बनाउन यो साधारण शिल्प सम्झना छैन र तपाइँका बच्चाहरु एक पटक यो समाप्त गरे संग खेल्न।
बच्चाहरूको लागि सेन्सररी खेलौनाहरू
आजको शिल्पमा हामीसँग सेन्सोररी बोतल र एउटा प्लास्टिकको बाल्टिन छ र साना बच्चाहरूलाई रमाइलो गर्न
गत्ता ट्यूबहरू भारतीय # yomequedoencasa जस्तो आकारको
आजको शिल्पमा हामीसँग केहि अजीब भारतीयहरू छन्, धेरै राम्रा र रंगीन। तिनीहरू रिसाइक्ल्ड कार्डबोर्ड ट्यूबहरू र रमाईलो रंगका साथ बनेका छन्।
गत्ता बच्चाहरू #yomequedoencasa बच्चाहरूको लागि अण्डाको कपको साथ बतख
बच्चाहरू द्वारा बनाइएको यो शिल्प याद नगर्नुहोस् जसमा उनीहरूसँग धेरै रमाइलो समय हुनेछ ... तिनीहरूले केहि अजीब कार्डबोर्ड बतखहरू सिर्जना गर्नेछन्!
युनिकोर्न आकारको क्यान्डी ब्यागहरू
क्यान्डी भण्डारण गर्न दुई मजेदार शिल्प कसरी बनाउने सिक्नुहोस्। एक झिल्ली जस्तो आकारको कार्डबोर्ड ट्यूबको साथ एउटा झोला र बक्स।
शिशु मेशिन बिना बच्चाहरूको मास्कहरू #yomequedoencasa
एउटा शिल्प जसले तपाईंलाई साना बच्चाहरूको लागि धेरै रमाइलो मास्कहरू बनाउन सिकाउँदछ। तिनीहरूलाई कसरी बनाउने सिक्नुहोस् बिना हातले र सिलाई मेशिन बिना।
प्रिंगल्स डु boats्गा #yomequedoencasa को साथ एक मूल विचार
आजको शिल्प रिसायकल गर्न एक शानदार विचार प्रस्ताव गर्दछ। यी कठिन दिनहरूमा हामी हाम्रो कल्पना परिवर्तन परिवर्तन गर्न सक्दछौं ...
प्लास्टिकको बोतल सहित पेन
यस शिल्पलाई प्लास्टिकको बोतलले नछुटाउनुहोस्! तपाईं आफैले पुन: साइकल गरिएको पेन्सिल बनाउन सक्नुहुन्छ वा जसलाई चाहानुहुन्छ।
कर्क्सको साथ सर्प
नमस्कार! आजको शिल्पमा हामी यो मजाको सर्प कोर्क्सको साथ बनाउन जाँदैछौं। तपाईं यसलाई आफूले चाहानु भएको आकार बनाउन सक्नुहुन्छ ...
पुरानो कपडाको साथ कुकुर चबाने
सबैलाई नमस्कार! यस शिल्पमा हामी पुरानो कपडाले कुकुरलाई टोक्ने छौं, यो उत्तम तरिका हो ...
टूथब्रश कप रिसाइक्लि glass ग्लास जार
सबैलाई नमस्कार! यस शिल्पमा हामी टूथब्रशको लागि एक राम्रो बोतल बनाउँदैछौं एक बोतल रिसाइक्ल गर्दै ...
फल किन्न जाल
सबैलाई नमस्कार! आजको शिल्पमा हामी एउटा रिसाइक्लिंग गरेर फल किन्न गाँठहरूको जाल बनाउन जाँदैछौं।
हामी different अलग कर्क साबुन भाँडा बनाउँछौं
सबैलाई नमस्कार! आजको शिल्पमा हामी तीन कर्क साबुन भाँडा बनाउन जाँदैछौं। प्रत्येक एक फरक। तिनीहरू धेरै…
कर्क्सको साथ ब्रेसलेट
सबैलाई नमस्कार! आजको शिल्पमा हामी कर्कहरूसँग एउटा कंगन बनाउने छौं, यो एकदम राम्रो देखिन्छ र यो छ ...
झुन्ड्याउनको लागि पाट रस्सीको टोकरी
यदि तपाइँको विचार केही मौलिक बनाउने हो भने सजावटी विचार गर्ने अर्को तरीका। हामी पाटी रस्सीका साथ टोकरीहरू बनाउन सक्छौं, धेरै सरल र छिटो।
प्रेम चार्ट बनाउन सजिलो
यो शिल्पलाई केहि सामग्रीहरू आवश्यक छ र गर्न सजिलो छ ... यदि तपाईं विशेष कसैलाई राम्रो कुरा दिन चाहानुहुन्छ भने, यो विचार तपाईंको लागि हो!
प्लास्टिकको कपको साथ बच्चाहरूको बत्ती
केही चश्माको साथ म बचकानी टचको साथ बत्ती बनाउन सक्षम भयो। यो साना बच्चाहरूको पार्टीको लागि धेरै राम्रो प्रस्ताव हो
सजावटको प्रकाश बोतल
तपाईको घरलाई सजाउन प्रकाशको बोतल नछुटाउनुहोस्। यो गर्नका लागि धेरै सजिलो छ र तपाईंलाई राम्रो नतीजाहरूको लागि दुई मिनेट मात्र चाहिन्छ।
हामी जुट डोरीको टोकरी बनाउँछौं
हामी जुट डोरीको टोकरी बनाउन सिक्नेछौं। तपाइँलाई कार्डबोर्ड बक्स र जूट डोरी चाहिन्छ जुन हामी तातो सिलिकॉनले मोहर लगाउँनेछौं।
बोराको आकारको क्रिसमस आभूषण
सबैलाई नमस्कार! आजको शिल्पमा हामी एउटा बोराको आकारमा क्रिसमसको आभूषण बनाउँदैछौं ...।
एक जुत्ता बक्सलाई मूल तरिकामा पुन: साइकल गर्नुहोस्
यदि तपाईं यहाँ रिसायकल गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईं यो गर्न को एक धेरै मौलिक तरीका छ, तपाईं बस एक बक्स बनाउन सक्षम हुन जूता बक्स हुनु पर्छ।
पार्टी ब्याग रिसाइक्लि milk मिल्क बक्स र कपडाहरू
सबैलाई नमस्कार! आजको शिल्पमा हामी दुध बक्सलाई रिसाइक्ल गर्दै एउटा पार्टी झोला बनाउने छौं ...
Cra शिल्प क्रिसमस मा ह्या hang्ग गर्न
तीन धेरै रमाईलो र मूल शिल्प बनाउन र क्रिसमस रूखमा झुण्ड्न। यो बच्चाहरूसँग गर्न सकिन्छ किनभने तिनीहरू सजिलो छन्।
P पोप्सिकल स्टिक शिल्प
पपसिकल स्टिकहरू प्रयोग गरेर धेरै सजिलो शिल्पहरू बनाउने चार तरिकाहरू। तिनीहरू बनाउनको लागि धेरै छिटो र सजिलो छ कि उनीहरू बच्चाहरूसँगै गर्न सकिन्छ
ममीको आकारमा हेलोवीन मैनबत्ती होल्डर
सबैलाई नमस्कार! यस शिल्पमा हामी तपाइँलाई हेलोवीनको लागि एक धेरै साधारण मैनबत्ती होल्डर कसरी बनाउने भनेर देखाउने छौं। के तपाई हेर्न चाहानुहुन्छ ...
डिकुपेजको साथ बक्स पुन: साइकल गर्नुहोस्
यदि तपाईंलाई रिसाइक्लि like मनपर्‍यो भने, यहाँ कार्डबोर्ड बक्स सजाउने उत्तम तरिका छ। हामी यसलाई एक्रिलिक पेन्टले सजाउँनेछौं र डिकूपेज प्रयोग गर्नेछौं।
लटकन पुनः प्रयोग जादु प्लास्टिक tuper
सबैलाई नमस्कार! आजको शिल्पमा हामी यस सुन्दर लटकनलाई पुनः प्रयोग गर्दै जादु प्लास्टिकलाई आधार बनाउँदैछौं ...
हामी जादुई प्लास्टिकको साथ कुकुरहरूको लागि एक पहिचान प्लेट बनाउँछौं
नमस्कार! आजको शिल्पमा हामी कुकुरहरू ट्युपरबाट जादुई प्लास्टिक पुन: प्रयोग गर्नका लागि एक परिचय ट्याग बनाउन लाग्छौं।
प्रिलिles्गको बोतलबाट क्यालिडोस्कोप बनाउनुहोस्
Pringles को ट्यूब प्रयोग गरेर र तपाईसँग हातमा हुन सक्ने सामग्रीहरूको साथ एक क्यालिडोस्कोप बनाउन हिम्मत गर्नुहोस्। बच्चाहरूसँग गर्न सजिलो र मूल।
बहुउद्देशीय झोला केहि प्यान्ट रीसायकलिंग
आजको शिल्पमा हामी केही प्यान्टहरू रिसाइकल गरेर बहुउद्देशीय झोला बनाउन गइरहेका छौं। यो एक सरल र उपयोगी तरीका हो ...
अन्तिम मिनेट उपहार विचार
यस शिल्पमा हामी तपाइँलाई अन्तिम मिनेट उपहार बनाउन विचार दिन जाँदैछौं। हामीसँग हामी चीजहरू प्रयोग गर्ने छौं ...
प्रकार कुकुर खिलौना चाउनुहोस्
आजको शिल्पमा हामी आधुनिक-प्रकारको कुकुर खेलौना बनाउन मोजा र टी-शर्टहरू रिसायकल गर्न गइरहेका छौं।
घण्टीहरूका लागि गहना बक्स, तिनीहरूलाई भण्डार गर्ने सुन्दर र सरल तरीका
यस शिल्पमा हामी एक गहना बक्स बनाउँदै छौं क्रमबद्ध ढ the्गले रि anहरू भण्डारण गर्न। यसको लागि हामी रिसायकल जाँदैछौं ...
यो शिल्पमा हामी डु boat्गा बनाउँदैछौं जुन डुats्गामा खेल्न सानाको लागि उत्तम, तैरिरहन्छ।
व्यक्तिगत टेबलक्लोथ रिसाइक्लि rubber रबर टेबलक्लोथ
के तपाइँसँग कुनै क्षतिग्रस्त रबर टेबलक्लोथहरू छन्? पक्कै त्यहाँ केहि अंश छ जुन व्यक्तिगत टेबलक्लोथ बनाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ।
रिसाइक्ड दुध डिब्बाहरूको साथ भाँडामा स Hang्घर्ष गर्दै
ह्याing्गिंग भाँडाहरू दुवै घर र बाहिरका लागि उपयुक्त छन्, दुधको डिब्बाहरूमा झुन्डो भाँडो बनाउने यस तरिकालाई नबिर्सनुहोस्!
हामी शौचालय कागज रोल बाट बाहिर उल्लू बनाउँछौं
आज हामी अर्को रिसाइक्लि cra शिल्प गर्न गइरहेका छौं। यस पटक हामी कागजको उल्लू रिसाइक्ल rol रोल बनाउने छौं।
हामी गिलासको बोतल पुनः प्रयोग गरेर फूलदान बनाउँछौं
राम्रो मौसमको साथ हामी पुनः सेक्रेर्ट गर्न चाहन्छौं, यसको लागि हामी गिलासको बोतल पुनः प्रयोग गरेर फूलदान बनाउँदैछौं। आफैंमा वा फूल फुलदादको रूपमा उत्तम
हामी गिलासको बोतल र एलईडी बत्ती संग दुई सजावटी बत्ती बनाउन
हामी गिलासको बोतलहरू र एलईडी बत्तीहरूसहित दुई सजावटी बत्तीहरू बनाउँछौं, कुनै पनि कोठालाई बढी स्वागत गर्ने बनाउनका साथै अति सजिलो र मौलिक।
हामी टुक्रिएको फूलपोटमा ल्यान्डस्केप बनाउँछौं
के तपाईसँग फुटेको फूलको भाडा छ? यसलाई फ्याक नगर्नुहोस्, हामी यससँग मौलिक फुलपाटहरू बनाउन सक्छौं, जस्तै यो टुक्रिएको फूलपोतमा यस परिदृश्य।
लकड़ी र आइसक्रीम स्टिकहरू बाहिर गहना बक्स कसरी बनाउने
आइसक्रीम स्टिकहरू र काठको पातलो पाना प्रयोग गरी शिल्प गहना बक्स कसरी बनाउने भन्नेको वर्णन। छिटो र गर्न को लागी सजिलो।
कागज र नूडल्सको रोलबाट कसरी "पानी स्टिक" बनाउने
पानीको छडी कसरी बनाउने भनेर वर्णन। एक शिल्प केटाकेटीसँग धेरै पुरानो मूलहरूको यो टक्कर उपकरणमा।
कसरी पुनर्चक्रित CD र क्रेप कागजको साथ माछा बनाउने
क्रेप कागजको साथ सजावटी माछाको जोडी बनाउनको लागि म्यूजिक सीडीहरू कसरी प्रयोग गर्ने भनेर वर्णन। गर्न सरल र द्रुत शिल्प।
सजावटका लागि आइसक्रिम स्टिकको साथ बनेको बक्स
कसरी आइसक्रिम स्टिकको साथ बनेको सानो काठको बक्स बनाउनेको शिल्प। रिसाइक्लि materials सामग्रीको लागि आदर्श, र सजावटी तत्त्वको रूपमा।
तपाईंको मोबाइलको साथ भिडियो रेकर्ड गर्न गृह समर्थन
हामी मोबाइलको लागि घरेलु समर्थन बनाउन गइरहेका छौं जुनसँग हामी दुध बक्सको कार्डबोर्डलाई रिसाइकल गरेर विभिन्न कोणबाट भिडियो रेकर्ड गर्न सक्छौं।
प्लास्टिक स्ट्रॉ र शौचालय कागज रोल संग पेन
कसरी स्ट्रस र एक शौचालय कागज को रोल सजिलै र चाँडै एक पन्सिल बनाउन को लागी वर्णन। बच्चाहरूको लागि एक विचार शिल्प।
अनाज बाकस कार्डबोर्डको साथ फोटो फ्रेम
कार्डबोर्ड र कार्डबोर्डको साथ फोटो फ्रेम कसरी बनाउने भन्ने प्रक्रिया। घरमै पुन: साइकल गरिएको सामग्रीका साथ शिल्प, छिटो बनाउनको लागि।
कसरी एउटा कागज रोल र स्ट्राहरूबाट ताडको रूख बनाउने
शौचालय कागज र स्ट्राको रोलको साथ एक पाम रूख कसरी बनाउने भन्ने बारेमा व्याख्या। घर मा एक रमाईलो र रमाईलो स्पर्श दिन को लागी आदर्श।
कसरी डिटर्जेंटको एक बोतल रिसाइक्लिaगरेर फ्लोपपट बनाउने
पानीको लागि फनेल सिर्जना गर्न ह्याण्डलको फाइदा उठाउँदै डिटर्जेंटको बोतललाई रिसाइक्लिंग गरेर कसरी फूलहरू बनाउने भन्ने फोटोहरूको स्पष्टीकरण र प्रक्रिया।
कसरी पप्पस्िकल स्टिकहरू बाट सजावटी राम्रो बनाउने
आइसक्रिम स्टिकहरूसँग कसरी सजावटी राम्रो बनाउने भन्ने कुराको विवरण पनि यसले फूलदान र सजावटको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ। बच्चाहरूको लागि आदर्श शिल्प!
Card ईस्टर शिल्प बच्चाहरूका लागि कार्डबोर्ड ट्यूबहरू
इस्टर आइपुग्न लागिरहेको छ र यसको मतलब यो छ कि हामीले यस मिति मनाउन ईस्टर शिल्पहरू तयार गर्नुपर्नेछ। त्यहाँ धेरै विचारहरू छन्, तर आजको भिडियोमा हामी इस्टरको लागि कार्डबोर्ड ट्यूबहरूसहित3शिल्पहरू कसरी बनाउने भनेर सिक्छौं, साना बच्चाहरूसँगै घरमा गर्न उत्तम, उनीहरूले तिनीहरूलाई प्रेम गर्दछन्।
केही पुरानो नो-सिउ पानाहरूका साथ कुकुर ओछ्यान कभर
हामी कुकुरको ओछ्यानमा कभर बनाउन गइरहेका छौं, केवल र चाँडै, पुरानो पाना प्रयोग गरेर र सिलाईको आवश्यकता बिना नै।
म्यूजिक सीडीहरूको रिसाइक्लि poly कसरी पोलिहेड्रा बनाउने
क्राफ्ट पॉलीहेड्रा कसरी बनाउने भन्ने कुराको स्पष्टीकरण, फाइदा लिदै म्यूजिक सीडीहरूको रिसाइक्लि।। घर सजावट को लागी वा उपहार को रूप मा आदर्श!
हामी शौचालय कागज रोल बाहिर एक कुकुर बनाउन
हामी एउटा साधारण शिल्प बनाउन जाँदैछौं, कुकुर आकारको पुतली टॉयलेट पेपरको रोल रिसाइक्लि with र यसका साथ ...
फराकिलो लुगा रिसाइक्लि:: हामी ठूलो पोशाकलाई त्यसमा बदल्छौं जुन फिगरसँग मिल्छ
धेरै पटक यो हुन्छ कि हामीसँग हामीले लगाएको पोशाक वा टीशर्ट छ, वा समयमा हामीले यो मन पराएका छौं तर ...
हामी शौचालय कागजको रोल रिसाइकल गरेर नोटबुक बनाउँछौं
शिल्प र रिसाइक्लि combको संयोजन भन्दा राम्रो के हो! यस पोष्टमा हामी घरमै शौचालय कागज र सामग्रीहरूको रोल रिसाइकल गर्ने एउटा नोटबुक बनाउने छौं।
टिन क्यान रिसाइक्ल गरेर कसरी मार्कर पेन आयोजक बनाउने
यस ट्यूटोरियलमा, म तपाईंलाई कसरी टिन क्यानको प्रयोग गरेर मार्कर र पेन्ट आयोजक सिर्जना गर्ने तरिका देखाउँदछु। यो धेरै सजावटको छ र सबै भन्दा माथि यो पर्याप्त छ। यस ट्यूटोरियलमा म तपाईंलाई कसरी टिन क्यानहरू सजिलै र चाँडै पुनः प्रयोग गर्ने मार्करहरू र पेन्टहरूको लागि एक आयोजक सिर्जना गर्ने तरिका देखाउँदछु।
प्लाष्टिक बोतलहरूद्वारा ल्याम्पहरू कसरी सिर्जना गर्ने
यस ट्यूटोरियलमा म तपाईंलाई प्लास्टिकको बोतलहरूलाई रिसायकल गर्न र सजावटी लालटेनहरूमा बदल्न विचार ल्याउँछु। तिनीहरू सजिलो, छिटो र सस्तो हो। यस ट्यूटोरियलमा म तपाईंलाई प्लास्टिकको बोतलहरूलाई रिसायकल गर्न र सजावटी लालटेनहरूमा बदल्न विचार ल्याउँछु। तिनीहरू गर्न सजिलो, छिटो र सस्तो हो।
कसरी रिसाइकलिंग सीडीहरू द्वारा फ्रुगल सG्गठन बनाउन
यस ट्यूटोरियलमा म तपाईलाई एक पुरानो CD हरू र DVD पुन: प्रयोग गर्न वा पुन: प्रयोग गर्न एक विचार ल्याउँछु। बच्चाहरूसँग गर्नु ठूलो हो र उनीहरूले उनीहरूको कोठा सज्जा गर्न सक्छन्। यस ट्यूटोरियलमा मँ तपाईंंलाई पुरानो सीडी र डीभीडीहरू फ्र्याक आयोजक सिर्जना गरेर पुन: प्रयोग गर्ने वा पुन: प्रयोग गर्ने विचार ल्याउँछु।
चाँडो र सजिलो विचारहरू ग्लास जारहरू रिसाइक्लि। गरेर सजावट गर्न
यस ट्यूटोरियलमा म तपाईलाई दुई विचारहरु लाई ल्याउन सक्छ ताकि तपाई तपाईको गिलास जारलाई रिसायकल गर्न सक्नुहुनेछ र केहि सजावटी तत्वहरु तपाईले अनुकूलन गर्न सक्नुहुन्छ यस ट्यूटोरियलमा म तपाईलाई दुई विचारहरु लाई ल्याउन सक्छ ताकि तपाईले आफ्नो गिलास जारलाई रिसायकल गर्न सक्नुहुनेछ र केहि सजावटी तत्वहरु सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ।
यस ट्यूटोरियलमा म कार्डबोर्ड ट्यूबहरूलाई रिसायकल गर्न3विचारहरू ल्याउँछु। तपाईं एक सुरुचिपूर्ण पेन्सिल, उपहार प्याकेज र एक डेस्क शेल्फ बनाउन सक्नुहुन्छ।
पायरोग्राफी र रंगको साथ काठका बुकमार्कहरू
पायरोग्राफी प्रविधिको साथ तपाईका पुस्तकहरूका लागि छुट्टीमा यो बुकमार्क कसरी बनाउने जान्नुहोस्, तपाइँ तपाइँलाई सबैभन्दा मनपर्ने डिजाईन बनाउन सक्नुहुन्छ।
मोबाइल कार्ड सिर्जना गर्न रिसाइकल कार्डबोर्ड बक्स र ग्लास जारहरू
यस ट्यूटोरियलमा मँ एकै समयमा तपाईलाई कार्डबोर्ड र गिलास जारहरू रिसायकल गर्न विचार ल्याउँछु। हामी फूलहरूको फूलदान र फूलदान र मोबाइल होल्डर सिर्जना गर्नेछौं।
ट्रान्सलिस्ट कन्डल होल्डरहरूमा केहि ग्लास जारहरू मोड्नुहोस्
यस ट्यूटोरियलमा म तपाईलाई काँचको भाडाहरू पुनः प्रयोग गर्न र तिनीहरूलाई सुन्दर पारदर्शी मोमबत्ती होल्डरहरूमा बदल्नको लागि एक विचार ल्याउँछु जुन दिन र रात दुबै कुनै ठाउँ सज्जा गर्दछ।
एक सुन्दर फूलदान बनाउन दुधको जग कसरी पुन: प्रयोग गर्ने।
एक राम्रो फूलदान बनाउन एक दुध पॉट कसरी पुन: प्रयोग गर्ने। तपाइँ यसलाई सेन्टरपीसको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ वा मिठो टेबल्स, फोटोकल सजाउनका लागि।
ANN सजिलो विचारहरू क्यान क्यान पुनक्रिया गर्न - चरण द्वारा कदम
यस ट्यूटोरियलमा म तपाइँलाई ideas विचारहरू ल्याउँदछ टिन क्यानलाई रिसाइकल गर्न र तिनीहरूलाई तपाइँको घरको लागि सुन्दर सजावटी वस्तुहरूमा परिवर्तन गर्न। ऊतकों को एक बक्स, एक मैनबत्ती होल्डर र एक फांसी भाँडा जसको साथ तपाईं त्याग्दैछन् ती वस्तुहरूलाई दोस्रो जीवन दिनुहुन्छ।
ID विचारहरू रिसाइकल शैम्पू जारहरू र बनाउने भाँडा
यस ट्यूटोरियलमा म तपाईलाई mp सजिलो विचारहरु ल्याउँदछु शैम्पू क्यानलाई रिसाइकल गर्न र सुन्दर फूलदानहरूमा बदल्न। प्रत्येक एक फरक तकनीक छ त्यसैले तपाईं नयाँ वस्तुहरू सिर्जना गर्न विभिन्न तरिकाहरू सिक्नुहुनेछ जुन तपाईं धेरै फरक डिजाइनहरूमा लागू गर्न सक्नुहुनेछ।
एक सीडी रिसाइक्लिंग गरेर कप होल्डर कसरी बनाउने।
आउनुहोस् हामी कसरी एक सीडी रिसाइकल गरेर कप होल्डर बनाउने भनेर हेरौं। यो ती डिस्कहरूको प्रयोग गर्ने बारे हो जुन अब तपाईंलाई सेवा दिँदैन र तिनीहरूलाई पूर्ण भिन्न प्रयोग दिँदै।
E सहज विचारहरू जीवन वा जीन्सलाई रिसाइक्लि। गर्नुहोस्
यस ट्यूटोरियलमा म3विचारहरू ल्याउँछु ताकि तपाईं आफ्नो जीन्स वा जीन्स सजिलै र रचनात्मक प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तिनीहरू धेरै उपयोगी शिल्पहरू हुन् जसमा तपाईं अधिक व्यक्तिगत मनपर्ने सजावट तत्त्वहरू थपेर आफ्नो व्यक्तिगत स्पर्श दिन सक्नुहुन्छ।
L आईडियाहरू फ्लावर्सहरू रिसाइक्लि C कार्डबर्ड ट्यूबहरू सिर्जना गर्न
यस ट्यूटोरियलमा म तपाईलाई ideas विचार ल्याउँदछु फूल बनाउनको लागि शौचालय कागज वा भान्सा कागजबाट कार्डबोर्ड ट्यूबलाई रिसाइक्ल गरेर। तिनीहरू बच्चाहरूसँग गर्न धेरै खुसी र अति उचित हुन्छन्, उनीहरूलाई आफूले मन पर्ने रंगहरूमा रंग्न दिईन्छ।
रिसाइकल क्यान र केहि पेन्सिल होल्डरहरू यस्तै बनाउनुहोस्
क्यान पुन: साइकल गर्नुहोस् र यस्तै पेन्सिल होल्डरहरू बनाउनुहोस्! यदि तपाइँ तिनीहरूलाई मनपराउँनुहुन्छ भने, म तपाईंलाई भन्नेछु कि तिनीहरू बनाउन धेरै सजिलो छ र सुन्दर हुनुका साथै तपाईं रिसाइक्लिंग पनि हुनुहुनेछ।
OT आईडियाहरू पोटाटोको रिसाइकल जारहरू - सिर्जनात्मक पुनरावर्तन
यस ट्यूटोरियलमा म तपाईं आलु चिप्स आउँछ जहां आलु जार वा गत्ता ट्यूबहरू रिसायकल गर्न3विचारहरू ल्याउन। तपाईंले पहिले नै धेरै पटक देख्नुभयो र तिनीहरू प्राप्त गर्न सजिलो छ।
ID आईडिया रिसाइक्लि P प्लास्टिक बैगहरू
यस ट्यूटोरियलमा म3विचारहरू ल्याउँदछु ताकि तपाईं प्लास्टिकको झोला रिसाइक्ल गरेर बिभिन्न वस्तुहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ। तिनीहरू गर्न को लागी धेरै सजिलो तर पनि धेरै उपयोगी छ। तपाईं चश्मा, बच्चाहरूको स्नैक ब्याग र केही ब्रेसलेटका लागि केस बनाउन सिक्नुहुनेछ।
यस ट्यूटोरियलमा म तपाईंलाई ideas विचारहरू देखाउँछु ताकि तपाईं कार्डबोर्ड ट्यूबहरू पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ र तिनीहरूलाई क्रिसमसको लागि सुन्दर सजावटमा परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ।
कसरी स्कूल नोटबुकबाट नोटबुक बनाउने र यसको उपस्थिति पूर्णरूपमा परिवर्तन गर्ने, कसैले पनि भन्दैन कि तपाईंले यसलाई त्यहाँबाट पाउनुभयो।
हलोविनका लागि R रिसाइक्लिLIN आईडियाहरू
यस ट्यूटोरियलमा म तपाईलाई Halloween विचारहरू ल्याउँदछु हेलोवीनका लागि पुनर्चक्रित वस्तुहरूको प्रयोग गरेर शिल्प बनाउन। सजिलो र सस्तो।
तपाईको पुरानो नोटबुकको रूप बदल्नुहोस्, त्यो व्यक्तिगत टच प्रदान गर्दै जुन तपाईलाई सबैभन्दा धेरै पहिचान गर्दछ।
तपाईको पुरानो नोटबुकको रूप बदल्नुहोस् जुन तपाईलाई सबैभन्दा बढी पहिचान गर्ने व्यक्तिगत टच प्रदान गर्दछ, रिसाइक्लिंगका साथै तपाईसँग नयाँ डिजाइन पनि हुन्छ।
Glass विचारहरू गिलास जारहरू पुन: प्रयोग गर्नका लागि - सिर्जनात्मक पुनरावर्तन
Ideas विचारहरू गिलास जार वा जारहरू पुनः प्रयोग गर्नुहोस्। एउटा वस्तु जुन हामी लगभग हरेक दिन आउँदछौं र निश्चित रूपमा तपाईंले ती सबै टाढा फाल्नुभयो।
प्लास्टिकको बोतलहरू रिसाइक्लिंग कसरी बर्डहाउस बनाउने
यस ट्यूटोरियलमा म तपाईंलाई कसरी सजिलैसँग उपलब्ध सामग्रीहरू र प्लास्टिकको बोतलहरू रिसाइक्लिंगबाट बर्डहाउस सिर्जना गर्ने तरिका देखाउँदछु।
कसरी पुन: साइकल गरिएको पेन्ट आयोजक बनाउने
यस ट्यूटोरियलमा म तपाईंलाई पट पेन्टहरूको लागि कसरी आयोजक बनाउने भनेर देखाउँछु। यो पुन: साइकल गरिएको सामग्रीहरू बनाउनको लागि एकदम सजिलो छ।
पार्टीहरू र समारोहहरूको लागि क्रेप कागजको साथ क्यान्डी बक्सहरू कसरी बनाउने
यस ट्यूटोरियलमा म तपाईंलाई सिकाउँछु कसरी सजिलो र कम सस्तो क्यान्डी बक्सहरू वा क्यान्डी बक्सहरू, पार्टीहरू, जन्मदिन, बच्चा स्नानहरू, कम्युनहरूको लागि उपयुक्त ...
मार्गारीटाले प्लास्टिकको क्याप्सले बनाएको हो
तपाईंको घरको कुना सजाउने र यसलाई धेरै राम्रो र मैत्रीपूर्ण बनाउनको लागि प्लास्टिक क्याप्सको रिसाइक्लिंग गरेर यो मार्गारिता कसरी बनाउने सिक्नुहोस्।
कसरी पुन: साइकल गरिएको मैनबत्ती होल्डर बनाउने
यस शिल्पमा हामी कसरी पुन: साइकल गरिएको मैनबत्ती होल्डर बनाउने भनेर देख्न सक्छौं, खाली ट्यूना प्रयोग गरेर आश्चर्यजनक परिणामको परिणाम हुन्छ।
क्रिसमसका लागि डिकूपेजको साथ कसरी एक चमकदार बोतल बनाउने
यस ट्यूटोरियलमा म तपाईंलाई सिकाउँछु कसरी एक चमकदार बोतल बनाउने, गिलासको बोतलहरू पुन: प्रयोग गरि क्रिसमसको रूपमा हेर्न बनाउन।
कसरी स्टिकहरू र कार्डबोर्डको साथ सजावटी क्रिसमस रूख बनाउन
यस ट्यूटोरियलमा म तपाईंलाई कसरी सस्तो र आधुनिक सजावटी क्रिसमस रूख बनाउने भनेर देखाउने छु। यो मूल हो र तपाईं यसलाई सजिलैसँग गर्न सक्नुहुनेछ।
कसरी फर्निचरको एक टुक्रा पुन: भोल्टर गर्ने
तपाईंको घर नविकरण यस ट्यूटोरियलको साथ कसरी फर्निचरको टुक्रालाई पुन: केन्द्रित गर्न सकिन्छ। गर्न धेरै नै सरल र सस्तो काम।
मैनबत्ती होल्डर रिसाइक्लिaक्यान
यस ट्यूटोरियलमा मँ तपाईंलाई मैनबत्ती होल्डरलाई संरक्षणको डिब्बा रिसाइक्लि make बनाउन चरण-चरण देखाउँछु। रिसाइक्लि toका साथै हामी केहि चरणहरूमा सजावट पनि गर्न सक्दछौं।
कफी क्याप्सूलको साथ लटकन हार
कसरी कफी क्याप्सुल रिसाइकल गर्ने जान्नुहोस् र तिनीहरूलाई यो बहुमूल्य पेंड्यान्टमा परिवर्तन गर्नुहोस् जुन तपाईंसँग रहेको कुनै कपडाको साथ यसलाई जोडिनेछ।
कसरी न्यूजप्रिन्ट बाउल्स बनाउने
यस ट्यूटोरियलमा तपाईं कसरी सजिलो र सस्तोमा न्यूजप्रिन्ट बाउल्स सिर्जना गर्ने सिक्नुहुनेछ। तिनीहरूको एक धेरै राम्रो परिणाम छ, तिनीहरू प्रतिरोधी र सस्तो छन्।
काठको लाठीको साथ हवाइजहाज
काठको स्टिकहरूसँग, यो हवाईजहाज निर्माण गर्नुहोस् यति मौलिक र साना सानाका लागि घरमा सजिलो समय बसाउन सजिलो छ।
सुगन्धित मैनबत्ती होल्डर
हेरौं कसरी एक सुगन्धित मैनबत्ती होल्डर बनाउने यो शिल्प जुन गर्न सजिलो छ र यो धेरै सुन्दर सजावटी तत्व हो:
कसरी डोरी हार बनाउने
यदि तपाईं पूर्ण रूपमा मौलिक र अद्वितीय गहना लगाउन चाहनुहुन्छ भने, यो ट्यूटोरियल नबिर्सिनुहोस्, जहाँ हामी तपाईंलाई कर्ड हार कसरी बनाउने भनेर देखाउनेछौं।
पिनकुशनका लागि पुन: पुनरावर्तन गर्न सकिन्छ
आज मँ तपाईंलाई एउटा शिल्प ल्याएको छु जुन, रिसाइक्लि toका साथै हाम्रो सिलाई कार्यमा पनि उपयोगी हुनेछ: हामी हेरौं हामी कसरी पुनर्चक्रित गर्न सक्छौं, यसलाई पिनकुशनमा परिवर्तन गर्न सजिलो र सरल तरिकामा।
जीन्सलाई रिसाइक्लिंग गरेर कसरी हृदयहरू बनाउने
तपाइँको जीन्सलाई कसरी रिसायकल गर्ने र सजावटको हृदयहरू धेरै सजीलो र चाँडो बनाउने।
रंगीन लालटेनहरू काँचको जारहरू पुनः प्रयोग गर्दै
गिलास जारहरू पुन: प्रयोग गरेर रंगीन लालटेनहरू बनाउन सिक्नुहोस्। टेरेसहरू र पार्टी प्रकाशको लागि उत्तम।
रिसाइकल सामग्रीको साथ नोटबुकहरू
आजको शिल्पमा हामी हेर्ने छौं कसरी अनाज बाकसलाई सुन्दर नोटप्याडमा रूपान्तरण गर्ने।
फल बाकस सजाउनुहोस्।
यस शिल्पमा हामी तपाईंलाई कसरी देखाउँदछौं, स्ट्रबेरीको बक्सबाट सुरू गरेर, यसको रूप परिवर्तन गरेर सजावटको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नेछौं।
बोक्सी पोशाक स्टोकिंगहरू
यस ट्यूटोरियलमा तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ कि केहि टाईटहरूलाई केही मोजामा रूपान्तरण गर्ने छ धेरै जादूको साथ आफैंले बनाएको बोक्सी पोशाकका लागि।
सोडा रिंग कंगन
ट्युटोरियल सोडा रिंगहरू पुनः प्रयोग गर्नको लागि। साधारण DIY जुन तपाईं अनगिनत सामानहरूमा लागू गर्न सक्नुहुनेछ: एउटा कंगन, एक हार, बेल्ट, आदि।
DIY फेदर टोपी
धेरै थोरै सामग्रीको साथ टोपी अनुकूलित गर्नुहोस्। यस DIY मा हामी टोपीलाई रिसायकल गर्नेछौं र यसलाई दोस्रो जीवन दिनेछौं।
फीताको साथ DIY सैंडल
शिल्प लेख जहाँ हामी सैंडललाई रिसायकल गर्न सिक्नेछौं र तिनीहरूलाई थोरै कल्पना र एक धेरै मौलिक तरीकाले दोस्रो जीवन दिनेछौं।
क्लच एक प्लेसमैटको साथ बनेको थियो
विश्वको सब भन्दा सजिलो तरीकामा आफ्नो क्लच वा झोला बनाउँनुहोस्। प्लेसम्याट, तातो सीलर ग्लू र फ्लप गहना प्रयोग गरेर क्लच बनाउनुहोस्
फेदी कपडा बाट बनेको
DIY लेखमा कसरी फेब्रिक यार्न वा पुरानो टी-शर्ट रिसाइक्लिंग गरेर एंकलेट कसरी बनाउने भन्ने बारे ट्यूटोरियल हुन्छ। सजिलो, रमाईलो र राम्रो।
ग्लासको बोतल वाटर कलरले रंगिएको
एक बोतललाई रिसायकल गर्न र यसलाई पानीको रंग पेन्ट्ससँग सजाउने ट्यूटोरियल जुन हामी गिलास वार्निशले ठीक गर्नेछौं।
एक स्कर्ट र क्रप माथि पोशाक अपसायकल गर्नुहोस्
एक बडीकोन पोशाकलाई दुई टुक्रामा पुन: साइकल गर्नुहोस्। आफैलाई क्रप शीर्ष बनाउँनुहोस् र कुनै समयमा र सजिलैसँग स्कर्ट गर्नुहोस्।
रिसाइक्ड टिन क्यानहरूसँग खेल्न
टिन क्यानहरूसँग खेल्न, हो! अलिकता मसी र मार्करको साथ हामी संरक्षणको केही क्यानहरूको रिसाइकल गर्न सक्दछौं र तिनीहरूलाई एक सुपर रमाइलो खेलौनामा बदल्न सक्छौं
केटीको फ्ल्याट पुन: प्रयोग गर्दै
केहि बिग्रिएको फ्लैटहरूको रिसाइक् we गरेर हामी उनीहरूलाई धेरै बनाउने प्रयोग गरिरहन सक्छौं र तिनीहरूलाई लगाएर पनि हामीलाई हाम्रो टच दिएर अनुकूलित गरियो।
पत्रिकाहरू संग फेरेरो रोचर बक्स सजावट
यस लेखमा हामी तपाईंलाई फेरेरो रोचर बाकस कसरी सजाउने भनेर देखाउँदछौं एक प्रकारको गहना बक्स वा तपाईंको मूल्यवान सामानहरू भण्डारण गर्नको लागि ठाउँ।